दशैंको बेला फुड पोईजनिङको संभावना र बच्ने उपायहरु- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २३, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — दशै-तिहार नेपालीहरुको महान् चाड हो । सबैले यो पर्व आ-आफ्नो गच्छेनुसार हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन् । दशैं-तिहारमा मिठोमसिनो स्वादिलो परिकार खाइन्छ ।
अधिकांशलाई खानपिन गर्न, रमाईलो गर्नुका साथै साथीभाई र आफ्न्तलाई भेटन भ्याइ-नभ्याइ हुन्छ । केटा-केटीहरु नयाँ लुगा लगाउने, पिङखेल्ने, चंगा उडाउँने गर्छन् ।
यस चाडपर्वमा प्रायले माछा, मासु तथा मासुका विभिन्न परिकारलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । दशैँमा मासु खाएन भने दशैँ आएको जस्तो लाग्दैन । दशैँको बेलामा बोका, खसी, राँगो, भैसी, कुखुरा, हाँस, परेवा, खरायो, भेडा, च्याड्ग्रा आदिको मासु खाने चलन छ ।
कतिपयले दशैंका लागि ३/४ महिना अगाडिदेखि नै खसी, बोका, सुगुँर, बंगुर आदि पालेर राखेका हुन्छन् । मिठो र स्वादिलो खानेकुराले दशैँलाई रमाईलो त बनाउँछ तर खानपिनको सन्तुलन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकिएन भने बिरामी हुने सम्भावना हुन्छ । दीर्घरोगी (ब्लडप्रेसर, डायबिटिज्, दम, युरिक एसिड) भएका व्यक्तिहरुलाई सिकिस्त बनाउने समय चाडपर्व बन्न सक्छ ।
चाडपर्वका लागि भनेर ल्याईएको माछा, मासु, मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थलगायतका परिकार बनाएर लामो समयसम्म राखिन्छ । आफन्तकोमा जाँदा वा आफन्त आउँदा कोशेलीको रुपमा मिठाई, फलफूलहरु हुन्छन् । दशैं मान्न आएका पाहुनाहरुलाई केहि दिन अघिबाट सञ्चित गरेर राखिएको माछा, मासु एवं अन्य परिकारहरु ख्वाएर स्वागत गर्ने गरिन्छ ।
उचित तापक्रममा खानेकुरालाई व्यवस्थित ढंगले राख्न नसक्दा बेक्टेरियाहरु उत्पन्न हुन्छन् । बेक्टेरिया भएको यस्ता खानाकुराले फुड पोइजन हुने गर्दछ ।
यसै प्रकार स्वच्छ खानेपानी भान्छा कोठाको सरसफाइको कमीका कारण पनि खानेकुरा संक्रमित भई मानिसहरु विभिन्न रोगको शिकार हुने गरेका छन् । विशेष गरी बुढा-पाका, केटाकेटीहरु तथा दीर्घरोगीहरुमा फुड पोइजन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । उनीहरुमा रोगसँग लड्ने क्षमता एउटा स्वस्थ व्यक्तिको दाँजोमा धैरै कमजोर हुन्छन् ।
फुडपोईजनबाट कतिपय उपचार नपाएर मृत्यु हुने गर्दछन् भने कसै-कसैको उपचारको क्रममा पनि मृत्यु हुन्छ ।
फुड पोइजन विभिन्न कारणबाट हुने गर्छ । राम्रोसँग नपाकेको काँचो खाना, बासी खानामा पाइने ई-कोलाइ, स्टेफाइलोकोकसलगायतका बेक्टेरियाहरु हुन्छन् । जसका कारण खाना दूषित हुन्छ । सरसफाइ नगरेको भान्छा कोठा र भाडाकुँडामा बनाइएको खाना पनि फुड पोईजनिङ्को अर्को कारण बन्दछ ।
यस्ता खाना खानाले मानिसहरुमा विभिन्न लक्षणाहरु देखा पर्दछ । खानेकुरा र पानीको माध्यमबाट शरीरमा बेक्टेरिया प्रवेश गर्छ । छिटो प्रजनन् हुने भएकाले शरीरमा प्रवेश गरेको ३० मिनेट देखि ४८ घन्टामा शरीरले प्रतिक्रिया देखाउन सुरु गर्दछ । यो नै रोगको पहिलो लक्षण हो । जिवाणु अनुसारको मानिसले लक्षण देखाउन थाल्दछ । जस्तो की भिव्रोकोलेरा जिवाणूका कारण पातलो दिशा र वान्ता हुने गर्दछ । सिगेलाका कारण दिशाबाट रगत जान्छ । अमिबाका कारण चिप्लो दिशा (आउँ) जाने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछ ।
वाक-वाकी लाग्ने, वान्ता हुने, झाडापखाला लाग्ने, उधो-उभो (मुखपेट) एकैपटक चल्ने, रिगँटा लाग्ने, दिशामा रगत आउँ देखा पर्ने, ज्वरो आईरहने, टाउको दुख्ने, पेटमा ऐठन हुने, मुटुको धडकन अस्भाविक रुपले बढने, शरीर झमझमाउने, ओठ-मुख सुक्ने जस्ता लक्षणहरु विरामीमा देखा पर्छ ।
खानाको सुरक्षा र सरसफाइलाई ध्यान दिन सकेमा फुड पोईजनबाट पूर्णरुपमा बच्न र बचाउन सकिन्छ । काँचो माछा, मासु, राम्ररी नपाकेको खाने कुरा पकाएर फ्रिजबाहिर लामो समयसम्म राख्ने गरिएका खानेकुराको सेवनले फुड फोईजन हुने गर्दछ । सबै ठाउँमा फ्रिज, डि-फ्रिज हुदैन, उचित तापक्रम मिलाएर राख्ने सुविधा नहुने भएकाले त्यस्ता खाने कुराले – झाडा-बान्ता, गेष्ट्राईटिसका साथै पाचनप्रणालीमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने गर्दछन् । त्यसकारण चाडबाडका लागि भनेर ल्याईएका खाने कुराहरुलाई पकाएर सकेसम्म लामो समय बाहिर नराखे यसबाट बच्न सकिन्छ । यदि राख्नु पर्ने भएमा फ्रिज वा डी-फ्रिजमा राख्नु पर्छ । सरसफाईमा ध्यान दिने हो भने दूषित खानाबाट हुने फुड पोईजनबाट बच्न सकिन्छ ।
झाडा र बान्ता हुनु भनेको शरीरले विषाक्त खाद्य पदार्थलाई बाहिर फ्यालेको हो । शरीरले आफ्नो डिफेन्सका लागि गर्ने एक स्वभाविक प्रक्रिया हो । जुन शरीरका लागि हितकर नै हुन्छ । सबै खाद्य पदार्थमा फुड पोईजनको असर एकनासको हुँदैन ।
त्यसै गरी फुड पोईजनको असर पनि सबै बिरामीमा एकनास देखिदैन । खाद्य-विषाक्त रोगबाट पीडित व्यक्ति पिच्छे लक्षण पनि फरक–फरक हुन्छ । सबै मानिसको पाचन शक्ति एक नासको हुँदैन । राम्रो पाचन शक्ति भएकाले पचाउन सक्छ भने नहुने बिरामी हुन्छन् । त्यही भएर फूड पोईजनका सबै बिरामी सिकिस्त हुँदैनन् । सामान्यतया जीवन जलजस्ता झोलीय पदार्थको सेवन गरी घरमै आराम गरी बसेमा तीन दिन मै निको हुन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिको बिरामी छन् भने तुरन्त अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फुड पोईजनका लागि रोगीको शारिरिक एवं मानसिक लक्षणहरुको साथै रोगीले सेवन गरेको खाद्य पदार्थको आधारमा प्रयोग हुने केहि होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्नप्रकार छन्:
(१) आर्सेनिक एल्ब ३ – सडे-गलेको माछा, मासु वा दूषित पानी खाएर फुड पोईजन भएको हो भने यसको प्रयोग लाभदायक हुन्छ ।
(२) लाइकोपोडियम२०० – समुन्द्री माछा सेलफिस खास गरि ओएस्टरको मासु खाएर फुड पोईजनको लक्षण देखिएको हो भने उक्त खाद्य पदार्थको नकारात्मक प्रभावलाई यो औषधिले हटाउँछ ।
(३) पल्साटीला३० – खासगरी आईसक्रिम, केक, तथा चिल्लोका साथै सडेको माछा, मासू खानाले पेट गडबड भएको हो भने यस औषधिको प्रयोग हितकार हुन्छ । यसका अलावा पनि लक्षण अनुसार नक्सवोमिका, एलिएमसिपा, चाईना, कार्बो भेज, नेट्रम फोस, मेगफास, नेटर्मसल्फ, कालिसल्फ आदि औषधिहरु फुडपोईजनमा दिन सकिन्छ ।
उपरोक्त औषधिहरु आफ्नो नजिकको योग्य तथा अनुभवी चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ १६:४६
आश्विन १७, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — बदलिंदो मौसममा एलर्जी हुनु सामान्य कुरो भईसकेको छ । मौसम परिवर्तन हुँदा एलर्जी हुने खतरा बढी हुन्छ । शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा हुने असन्तुलनको कारणले गर्दा मानिस एलर्जीको शिकार हुन्छ ।
मौसम परिवर्तन हुँदा राइनाइटिस् (नाकको एलर्जी) एलर्जीक अस्थमा (श्वास) र स्किन एलर्जी, खाद्य पदार्थको सेवनबाट एलर्जी हुनु सामान्य कुरो हो । मौसममा परिवर्तन हुँदा केटा-केटी, महिला तथा बुढा-पाकाहरुमा एलर्जीको समस्या पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।
आमा-बाबु मध्ये कुनै एक जनालाई कुनै प्रकारको एलर्जीको समस्या छ भने उनीहरुको सन्तानमा पनि एलर्जी हुने संभावना पचास प्रतिशत रहन्छ ।
लक्षण : शरीरमा डाबर आउनु, चिलाउनु, बारम्बार-रुघ लाग्नु, हाँक्च्छु आउनु, आँखा र नाक चिलाउनु, ज्वरो आउनुको साथै शरीरका मांसपेशीहरु दुख्नु यसका शुरुका लक्षणहरु हुन् । खाद्य पदार्थबाट हुने एलर्जीमा खाना खाएको केहि मिनट पछि अनुहार चिलाउने, डाबर आउने, औंठ, अनुहार, जिब्रो, घाँटी या शरीरको अन्य भाग सुन्निने, साँस फेर्न गाह्रो हुने, पेट दुख्ने, पातलो दिशा हुने, बान्ता हुने चक्कर लाग्ने, ब्लड प्रेसर कम हुने, बेहोस भएर लड्ने आदि जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । यसको आधारमा नै रोगको पहिचान हुन्छ । नाक चिलाउनुका साथै हक्च्छुँ पनि आउनु । नाकबाट पानी बग्नु । नाकको छाला रातो हुनु । जुन घरी-घरी नाक साफ गर्नले हुन्छ । यदि तपाईलाई यस्तो भईरहेको छ भने, सतर्क हुनुस्, यो नाकको एलर्जी (राईनाईटिस्) नाकको ईन्फेक्सन पनि हुन सक्छ ।
कारण : यस रोगको कारण कयौं प्रकारको एलर्जी हुनु हो । यस मध्ये मुख्य हो, प्रदूषण, धूलो-माटो, घाँस, पराल तथा रुख-पात, बिरुवाको परागणक एवं खाद्य एलर्जी । घरबाट बाहिर निस्किदा धूलो, धुवाँ र वायुमण्डलमा फैलिएको प्रदूषण मानिसको नाकमा प्रवेश गर्दछ । यही एलर्जी राइनाइटिसको कारण बन्दछ । यसको अलावा कुकूर, बिरालो पाल्ने घर परिवारमा पनि एलर्जी हुने जोखिम बढि हुन्छ। भुत्ला हुने जनावरहरु कुकुर, बिरालोको रौं बराबर भुईमा झरिरहन्छ । जुन एलर्जीको कारण बन्न सक्छ ।
जोखिम : नाकको एलर्जीले साइनसको ऑस्टिया (हड्डिको प्वाल) लाई बन्द गर्न सक्छ । जुन पछि गएर साइनोसाइटिस (पिनास) को कारण बन्न सक्छ । यसले नाक भित्र पालिपस (मासुको) डल्लो बनाउन सक्छ । यसले ऑडिटरी ट्यूब (श्रवण) नली लाई बन्द गर्न सक्छ । जसले गर्दा कानको मध्यभागमा पानी भरिन सक्छ । यस्ता बिरामीहरुमा दम हुने जोखिम चार गुणाले बढ़न जान्छ ।
१. इन्फेक्शनबाट बच्ने प्रयास गर्ने ।
२. चिसो हावा, धूलो-धुवाँ र ओसिलो ठाउँबाट बच्ने ।
३. घरबाट बाहिर निस्किंदा कोशिश गर्ने कि धूलोको कण नाकभित्र कम से कम मात्रा जाओस ।
४. यदि धूलो-धुवाँ भएको ठाउँमा जानु पर्यो भने मास्क या रुमाल राखेर जाने ।
१०. जुन चिजको प्रयोगले छालामा एलर्जी हुन्छ, त्यस चिजलाई नोट गर्ने र त्यो बस्तुको प्रयोग गर्न बन्द गरि दिने । छालाको जुन भागमा एलर्जी हुन्छ, त्यहाँ कुनैपनि प्रकारको कास्मेटिक साधनको प्रयोग नगर्ने ।
१३. घरमा बात्ती (सलेदो) भएको स्टोभको ठाउँमा एलपीजी या इलेक्ट्रिक स्टोभको उपयोग गर्ने ।
१४. घरमा शुद्ध वायु आउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
१५. घर यदि सडक छेउमा छ भने बाहिरको धूलो-माटो कोठाभित्र आउन रोक्नको लागि झ्याल ढोका सकेसम्म बन्द राख्ने या झ्यालमा सिसाको साथै मसिनो जाली लगाउने ।
१६. किचनमा एक्जस्ट फ्यानको उपयोग गर्ने ।
१७. धैरै जसोलाई फूलको बास्नले पनि एलर्जी हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले फुलफुल्ने किसिमको बिरुबा कोठामा नराखने ।
१८. आफ्नो औछ्यानलाई सफा-सुघर राख्ने ।
२०. घरको भित्तामा ढुस्सि या जाली लागेकोछ भने त्यसलाइ ब्लिच गरेर सफा गर्ने ।
२१. बर्षा मौसम स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो मानिन्छ, तर केहि खास किसिमका रोगहरु जस्तै- अस्थमा, हृदय रोग, क्यान्सरबाट ग्रसित व्यक्तिहरुको लागि यो मौसमले केहि समस्या पनि ल्याउछ ।
२२. प्रतिदिन बिचार गर्नुस् कुनचिज खाएपछि वा लगाएपछि शरीरमा एलर्जीको लक्षण देखिन्छ भन्ने कुरा । त्यस्ता बिशेष चिजको नाम अगाडि x को निशान लगाई दिने र त्यो बस्तु खान वा लगाउन बन्द गरिदिने । यदि अलिकति सावाधानी अपनाउने हो र समयमै उपचार गर्ने हो भने सजिलैसित यस रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । एलर्जीको उपचार भनेको हाम्रो बाह्य बातावरणमा मौजुद रहेको एलर्जनबाट बच्नु नै यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।
उपचार : होमियोप्याथिक चिकित्सामा रोगीको ईम्युन सिस्टमलाई सबल बनाइ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने हुनाले यसमा रोगको जरैबाट उपचार गर्ने गरिन्छ र एलर्जी स्थायी रुपमा निको भएर जान्छ ।
औषधिहरु : होमियोप्याथिकमा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणहरुलाई मध्यनजर राखेर (टोटालिटी अफ सिम्पटमस्) को आधारमा औषधि उपचार गरिन्छ । प्राय गरी एलर्जीको समस्या भएकोमा प्रयोग गर्ने औषधिहरु निम्नलिखित छन ।
* धुलो र परफ्युमबाट हुने एलर्जीको लागि - हिस्टामिनको प्रयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
* रोटी र अमिलो खाद्य पदार्थबाट हुने एलर्जीको लागि – नेट्रम-म्युरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
* उमालेको दुध पिउदा हुने एलर्जीमा - सिपिया नामक औषधि उपयोगी हुन्छ ।
* यदि कसैलाई नुन, मख्खन, अन्डा र कुखुराको मासुबाट एलर्जी छ भने – कार्बोभेजको सेवन गर्दा फाईदा हुन्छ ।
* यदि कसैलाई कफि पिउँदा एलर्जी उत्पन्न हुन्छ भने – नक्स-बोमिका लिन सकिन्छ ।
* घामबाट एलर्जी छ भने - बिरामीले एपिसमेलिफिका औषधिको प्रयोग गरेमा निको हुन्छ ।
* कसैलाई फुलको सुगंन्धबाट एलर्जी हुन्छ भने – उसले एलियन्थस नामक औषधिको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
* यसै गरी धुलोबाट रूघ लाग्ने, हच्छ्यु आउने समस्या भएको छ भने – बिरामिले जस्टिसिया अधोटोडा नामक होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोग गरे फाईदा हुन्छ ।
उपरोक्त औषधिहरुको प्रयोग आफ्नो नजिकको कुनै योग्य तथा अनुभवि चिकित्सकको सल्लाह लिई गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ ११:५७